ရေရှည်လေ့ကျင့်ခန်းသည် dorso-ventral ဝင်ရိုးတလျှောက်ရှိ Hippocampus ရှိ inFosB Induction အတွက်အစွမ်းထက်အစပျိုးခြင်း (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆတ်ပေါ်တွင်။
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013 နိုဝင်ဘာ 25; 8 (11): e81245 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0081245 ။
Nishijima T က, Kawakami M က, Kita ငါ.
အပြုအမူဇီဝကမ္မဗေဒ, လူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဘွဲ့လွန်ကျောင်း, တိုကျိုမြို့တော်တက္ကသိုလ်, တိုကျို, ဂျပန်ဓာတ်ခွဲခန်း။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း hippocampal function ကိုမျိုးစုံကိုရှုထောင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်။ အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအာရုံခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမြှင့်တင်နိုင်ဖို့သော့ချက်ကြောင်းအယူအဆနှင့်အညီ, ယခင်စာပေတသမတ်တည်းလေ့ကျင့်ခန်း၏စူးရှသောအကြိမ်ကြိမ်အဆိုပါ hippocampus အတွက်အာရုံခံ activation ကျလာသောကြောင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ရေရှည်အာရုံကြော plasticity mediates သောကူးယူအချက်ΔFosB၏တစ်ဦးစုဆောင်းခြင်းမှလှုံ့ဆော်မှုခဲကိုသက်ဝင်ထပ်ခါတစ်လဲလဲ.
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးအဆိုပါ hippocampus အတွက်ΔFosBစကားရပ် induces, နှင့် dorso-ventral ဝင်ရိုးတလျှောက် hippocampal subfields အတွင်းမည်သည့်အလားအလာရှိသောဒေသ-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်သောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အထီး C57BL /6ကြွက်4ရက်သတ္တပတ်တစ်ပြေးဘီးနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲသျောခဲ့ကြသည်။ သိသိသာသာအပြေးရေရှည်ဘီးတိုင်းတာအားလုံး hippocampal ဒေသများတွင် FosB / ΔFosB immunoreactivity တိုးလာ (ဆိုလိုသည်မှာယင်း dorsal နှင့် ventral hippocampus နှစ်ဦးစလုံး၏ DG, CA1 နှင့် CA3 subfields အတွက်) ။ ရလဒ်များ hippocampus အတွင်း FosB / ΔFosBအတွက်ယူနီဖောင်းတိုးပြေး၏ non-တိကျတဲ့အကျိုးဆက်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုသည် cortex အတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏ဘီးပြေးသွေးဆောင်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်းချေဒေတာတိုးမြှင့ hippocampal FosB / ΔFosB immunoreactivity အဓိကအားတိုးလာΔFosBကြောင့်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။ ဤရလဒ်သည်ရေရှည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်း dorsal နှင့် ventral hippocampus-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြလိုတစ်ခုလုံးကို hippocampus, တလျှောက်လုံးΔFosBသော induction များအတွက်အစွမ်းထက်ခလုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့ DG အတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်အပြုသဘော doublecortin-immunoreactive (ဆိုလိုသည်မှာနု) အာရုံခံ၏နံပါတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ΔFosBလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis mediates ပေးသောအားဖြင့်ယန္တယားနေဆဲမသေချာမရေရာသော်လည်း, ထိုဒေတာများကိုလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis ကအနည်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုမှီခိုကြောင်းဆိုလို။ အတူတူယူကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရလဒ်တွေကိုΔFosBလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ hippocampal plasticity ထိန်းညှိတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အသစ်တစ်ခုကိုမော်လီကျူးပစ်မှတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်း [ကြွက်များတွင် hippocampus ၏, မော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ရှုထောင့်အပေါ်မတူကွဲပြားအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးအပ်1,2] အရာအချို့ကိုလူ့လေ့လာမှုများကထောက်ခံခဲ့ကြသည် [3,4] ။ သို့သော် hippocampal plasticity အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံသည့်ယန္တရားများလုံလုံလောက်လောက်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။ ယခင်စာပေတသမတ်တည်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များတွင် hippocampal အာရုံခံ activation evokes ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ က c-Fos, ယာယီအာရုံခံ activation တစ်အမှတ်အသား, အသုံးပြု. Immunohistochemical လေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံးအတင်းအကျပ်နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ပြေး [က, dentate gyrus (DG) အတွက်ကြွက် hippocampus ၏ CA1 နှင့် CA3 subfields က c-Fos စကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ5-7] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လေဆာ-Doppler flowmetry (LDF) ကို အသုံးပြု. ယခင်လေ့လာမှုပျော့ပြေးစက်ကြွက်များတွင် CA1 subfield အတွက်တိုးမြှင့်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု (rCBF), အာရုံခံ activation တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအမှတ်အသားပြေးကြောင်းသရုပ်ပြထားပါတယ်  ။ Immunohistochemical လေ့လာမှုများလေ့ကျင့်ခန်းစဲပြီး LDF လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာတစ်ဦး local area ထဲမှာ rCBF ၏ Real-time စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်စဉ်အသေးစိတ်ဒေသ-တိကျတဲ့, လေ့လာဆန်းစစ် enable ။ တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှု၏အားသာချက်များနှင့်ကန့်သတ်နေသော်လည်းဤလေ့လာမှုများအလားတူ hippocampal အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏စူးရှသောအကြိမ်ကြိမ်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ရေရှည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းထပ်တလဲလဲအာရုံခံ activation [ထွက်လာပါတယ်အားဖြင့် hippocampal plasticity အားပေးအားမြှောက်ခွနေတဲ့ယန္တရားအကြံပြု9].
အဆိုပါကူးယူအချက်ΔFosB full-အရှည် FosB တစ်ခြင်းကို splice isoform [ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တည်ငြိမ်မှု (ရက်သတ္တပတ်၏တစ်ဝက်ဘဝ) ၏ကတဖြည်းဖြည်းစုပုံဘယ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးအားဖြင့်သွေးဆောင်နေသည်10-12] ။ သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ် [ΔFosB၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်အထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်ကြာရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity ဖျန်ဖြေကြောင်းပြသ11,13]. ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးလေ့ဒီဆေးတွေတိုးမြှင် sensitivity ကိုအခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားများ၏တဦးတည်းကိုယ်စားပြုသည်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBစကားရပ်ကိုတိုးပွားစေ [11,14,15] ။ S ကimilarly High-အဆီအစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြားအပါအဝငျအခွားသောဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုမှ [16,17] ဌOng-သက်တမ်းမိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးကိုလည်းမိမိဆန္ဒအလျောက်ပြေးကြွက်များအတွက်သဘာဝဆုလာဘ်ကြောင်းအကြံပြု, ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity တိုးလာ [18,19]. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးမှမရှိ, စာပေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့သည့် hippocampus အတွက်ΔFosBစကားရပ် induces ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် hippocampus အတွက်အာရုံခံ activation ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်, ကျနော်တို့ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးကိုလည်း hippocampus အတွက်ΔFosBစကားရပ်သွေးဆောင်မယ်လို့တွေးဆ။ ΔFosB hippocampal plasticity ထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်အတိအကျယန္တရားများမသေချာရှိနေဆဲနေစဉ်, လေ့လာမှုများကြွက်တွေဟာချို့တဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ fosB ဗီဇပြ hippocampal neurogenesis နှင့်တိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူအာရုံချို့ယွင်း [20,21] ။ ငါndeed, လေ့ကျင့်ခန်း neurogenesis မြှင့်တင်ရန်နှင့်လက္ခဏာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဖို့လူသိများသည် [22-25] ။ ငါကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်မှန်ကန်, f, ΔFosBလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ hippocampal plasticity ဖြန်ဖြေသစ်တစ်ခုအလားအလာမော်လီကျူးပစ်မှတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ hippocampus [ယင်း၏ longitudinal (dorso-ventral) ဝင်ရိုးတလျှောက်တွင်ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ gradient ကိုရှိပါတယ်26] ။ အဆိုပါ dorsal hippocampus [Spatial သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ27,28], အ ventral hippocampus စိတ်ခံစားမှုအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိအတွက်ဦးစားပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း [29,30] ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုများ [ဇီဝကမ္မလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ dorsal အတွက်က c-Fos စကားရပ်နှင့် hippocampus ၏ ventral ဝေမျှ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများသွေးဆောင်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ31-33] ။ လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်မျိုးလုံး dorsal တိုးတက်ကောင်းမွန်သောကြောင့် [34-37] နှင့် ventral hippocampus-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို [24,25,38] ဒါကြောင့်ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ပြေးအဆိုပါ hippocampus အတွက်ΔFosB၏ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကယူဆချက်ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးမောက် hippocampus အတွက်ΔFosBစကားရပ်သွေးဆောင်မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအယူအဆဒေသ-တိကျတဲ့သော induction ဖော်ထုတ်အပေါ်အပိုအလေးပေးနှင့်တကွ, ပု dorsal နှင့် ventral hippocampal subfields အတွက် FosB / ΔFosB immunohistochemistry အားဖြင့် DG, CA1 နှင့် CA3 စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရလဒ်များ၏ isoform ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည့်အနောက်တိုင်းချေ, ကအတည်ပြုခဲ့သည် fosB အဆိုပါ hippocampus အတွက်သွေးဆောင်ဗီဇထုတ်ကုန်။ ငါတို့သည်လည်းရေရှည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသည် non-အထူးဦးနှောက်ထဲမှာ FosB / ΔFosB immunoreactivity တိုးပွားလာသောဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ဒေသ-တိကျတဲ့ FosB / ΔFosBသော induction များအတွက် cortex ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ FosB / ΔFosBစကားရပ်နှင့် neurogenesis အကြားဆက်စပ်မှုအသင်းအဖွဲ့ hippocampal plasticity ထိန်းညှိအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေΔFosBသော induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှာကြံအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
နှစ်ဆယ်အထီး C57BL /6ကြွက် (အသက်၏ 8 ရက်သတ္တပတ်) စီးပွားဖြစ်မျိုးဆက်များ (SLC, Shizuoka, ဂျပန်) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဆယ်ပါးကြွက်စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်စမ်းသပ်မှု2များအတွက်အခြားတဆယ်ဘို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ထိန်းချုပ်ထားအပူချိန်၏အခြေအနေများ (22-24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နှင့်အလင်း (12 / 12-ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ, 0500 မှာပေါ်ထွန်းညှိ) အရသျော ဖြစ်. , အစားအစာနှင့်ရေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum။ အားလုံးစမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးတိုကျိုမြို့တော်တက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများတွင်ဆိုက်ရောက်ပေါ်၌ကြွက်ကျပန်းတစ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုသည် (ထိန်းချုပ်ရေး, ဎ = 5) သို့မဟုတ်တစ်ပြေးအုပ်စုသည် (Runner, ဎ = 5) ဖြစ်စေဖို့တာဝန်ကျတယ်။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့အားလုံးကြွက်ကနဦး acclimatation များအတွက် (5 ကြွက် / လှောင်အိမ်) အုပ်စုများအတွက်စံပလပ်စတစ်အိတ်များ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် Runner ကြွက်တစ်ပြေးဘီး (ENV-046, Med တွဲဘက် Inc ကို, ဂျော်ဂျီယာ, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ) တပ်ဆင်ထားတဲ့လှောင်အိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေအတွက် hippocampus အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis ဖိနှိပ်သိသောကြောင့်  Runner ကြွက်တစ်ဦးအပိုဆောင်း5ပတ်အုပ်စုတစု (4 ကြွက် / လှောင်အိမ်) အဖြစ်သျောခဲ့ကြသည်။ ဘီးလည့်အရေအတွက်အသီးအသီးနံနက်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (ဂရမ်) အပတ်စဉ်တိုင်းတာခဲ့သည်။
2: 1 စမ်းသပ်။ FosB / ΔFosBစကားရပ်နှင့် hippocampal neurogenesis ၏ Immunohistochemical စာမေးပွဲ
2.1: Perfusion နှင့်တစ်ရှူးအပြောင်းအလဲနဲ့
အဆိုပါအပြေးကာလ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ပြီးနောက်နံနက် (0900-1100), ကြွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း pentobarbital ဆိုဒီယမ်နှင့်အတူ anesthetized နှင့် transcardially အအေးဆားနှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ကိုအလျင်အမြန်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နေ့ချင်းညချင်းဆား (PBS, သော pH 4) buffered 0.1 M ကဖော့စဖိတ်အတွက် 7.4% paraformaldehyde အတွက် Post-fixed ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်ထို့နောက် PBS အတွက် 30% sucrose အတွက် cryoprotected နှင့်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့သည်အထိအေးခဲခဲ့သည်။ တစ်ဦး hemisphere ၏မှု Coronal ဦးနှောက်အပိုင်း (40 μm) တစ်ခဲ microtome သုံးပြီးရယူ 0.01% ဆိုဒီယမ် azide နှင့်အတူ PBS အတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
အပိုင်းတစ်ဦးကတဦးတည်း-In-ခြောက်လစီးရီးကျပန်း FosB / ΔFosB immunostaining အဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ တစ်ဦးကပ်လျက်စီးရီးတံဆိပ်ကပ် doublecortin (DCX), neurogenesis အကဲဖြတ်ဘို့အတည်ပြုနုအာရုံခံတဲ့အမှတ်အသား [အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်40,41] ။ 1% H ကိုအတူ endogenous peroxidase လှုပ်ရှားမှုအအေးခံပြီးနောက်2O2 PBS အတွက်အခမဲ့-floating ကဏ္ဍများ 10 ဇများအတွက် PBS အတွက် 2% ပုံမှန်မြင်းသွေးရည်ကြည်များဖြေရှင်းနည်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အတူ preincubated ခဲ့ကြသည်။ PBS အတွက်လြျှောအပြီးတွင်ပုဒ်မ (1: 1000, SC-48, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Dallas မြို့, တက္ကဆပ်, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ယုန် polyclonal ဒယ်အိုး-FosB antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် 0.5% ထရီ X-100 နှင့် 0.5% BSA နှင့်အတူ PBS အတွက်ရော (PBST 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ4ဇများအတွက် -BSA) ။ 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 500 ဇများအတွက် PBST-BSA အတွက်: (8066, SC-48, Santa Cruz 4) အပိုင်း၏နောက်ထပ်စီးရီးဆိတ်သငယ်ကို polyclonal Anti-DCX antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ PBST-BSA အတွက်:;: အဆိုပါကဏ္ဍများကိုနောက်ထပ်တစ်ဦးသင့်လျော်သော biotinylated အလယ်တန်း antibody ကို (1, AP1000B, EMD Millipore, Billerica ကနေနှစ်ဦးစလုံးပဋိ MA, USA သို့ Anti-ဆိတ်သငယ်ကို IgG, 182 1, AP1000B Anti-ယုန် IgG, 180) နဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် အခန်းအပူချိန်မှာ2ဇသည်။ အဆိုပါကဏ္ဍများပြီးတော့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအောက်ပါ 90 မိဘို့ avidin-ဓါတ်-peroxidase ရှုပ်ထွေးသော (Vectastain ABC ရုပ်သံ peroxidase ကိရိယာအစုံ, Vector Laboratories Inc မှ, Burlingame,, CA, USA) နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ antigen နောက်ဆုံးတော့ 0.02% H ကိုပါဝင်တဲ့ 3,3 M က Tris-HCl (pH ကို 0.1) တွင် 7.6% 0.01-diaminobenzidine (DAB) နှင့်အတူမြင်ခဲ့သည်2O2။ FosB / ΔFosB immunostaining အဘို့, တုံ့ပြန်မှုနီကယ် Ammonium sulfate နှင့်အတူပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ DCX အစွန်းအထင်းအဘို့, ဆဲလ်အရေးပါ Nissl အစွန်းအထင်းတွေနဲ့ counterstained ခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ gelatin-coated ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်နှင့် coverslips ထားရှိခဲ့ကြသည်။
2.3: image ကိုတံခါးခုံကို အသုံးပြု. FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏အရေအတွက်
ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ဒယ်အိုး-FosB antibody ကို FosB နှင့်ΔFosB N-terminal ကိုဒေသအားဖြင့်မျှဝေထားတဲ့အတွင်းပိုင်းဒေသဆန့်ကျင်ကြီးပြင်း, ဒါကြောင့်နှစ်ခု isoforms အကြားခွဲခြားမှုမရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် immunostained အဆောက်အဦများ FosB / ΔFosB immunoreactive (FosB / ΔFosB-ir) အရေးပါအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးဘက်မလိုက်မျက်စိကန်းအရေအတွက်အဘို့, ဆလိုက်ကြိုတင်ဆန်းစစ်ရန် coded ခဲ့ကြသည်။ မောက်ဦးနှောက် Atlas  အကျိုးစီးပွား (ROIs) ၏အောက်ပါဒေသတည်နေရာကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်: DG ၏ granules ဆဲလ်အလွှာ (GCL) (3 အပိုင်း), ပိရမစ်ကြီးဆဲလ် CA1 ၏အလွှာ (3 အပိုင်း) နှင့် CA3 (2-3 အပိုင်း) ကို dorsal hippocampus အတွက် (ထို bregma ထံမှ -2.2 မီလီမီတာမှပိတ်သိမ်း); DG (2 အပိုင်း), CA1 (2 အပိုင်း), နှင့် ventral hippocampus အတွက် CA3 (2 အပိုင်း) (ပု bregma ထံမှမီလီမီတာ -3.4 မှပိတ်သိမ်း) (ပုံ 4,) ထားခဲ့တယ်။ အဆိုပါ caudal ကဏ္ဍများအတွက် dorsal နှင့် hippocampus ၏ ventral ဝေမျှနှစ်ဦးစလုံးဆံ့ပေမယ် ventral သောအဘို့ကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ DG, suprapyramidal (DGsp) နှင့် infrapyramidal ခုနှစ်တွင် (DGip) ဓါးသွားသီးခြားစီဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ မော်တော် cortex (2-3 ကဏ္ဍများသည် bregma ထံမှ -0.6 မီလီမီတာမှပိတ်သိမ်း), somatosensory စည် cortex (2-3 ကဏ္ဍများသည် bregma ထံမှ -0.6 မီလီမီတာမှပိတ်သိမ်း), အမြင်အာရုံ cortex (3 ကဏ္ဍများ, မှ -2.9 မီလီမီတာမှပိတ်ထား bregma), အာရုံ cortex (3 ကဏ္ဍများသည် bregma ထံမှ -2.9 မီလီမီတာမှပိတ်သိမ်း), နှင့် olfactory မီးသီး (3 ကဏ္ဍများသည် bregma ထံမှ + 4.3 မီလီမီတာမှပိတ်သိမ်း) ကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြသည် (ပုံ 6,) ထားခဲ့တယ်။
တစ်ဦးကသိသိသာသာဆက်စပ် image ကိုခုံနှင့် FosB / ΔFosB-ir အရေးပါ (အရေးပါ / မီလီမီတာ၏သိပ်သည်းဆအားဖြင့်ရရှိသော FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာ (% Roi) တို့အကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်2) ကို manual ရေတွက်ခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ hippocampal ROIs အတွက် FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာ၏အရေအတွက်။
တစ်ဦးချင်းစီရွယ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကို (2070 × 1548 pixels) တစ်ဦး CCD ကင်မရာ (DP-51, Olympus တို့) နှင့်ပုံရိပ် software ကိုတပ်ဆင်ထားကာ optical ဏု (BX-73, Olympus တို့, တိုကျို, ဂျပန်) (cellSens, Olympus တို့) ခန့်ကို အသုံးပြု. ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် ရည်ရွယ်ချက်မှန်ဘီလူးချဲ့ hippocampal ROIs နှင့် cortical ROIs များအတွက် 10 ×များအတွက်4×ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလယ်အလတ်-to-ခိုင်မာတဲ့ FosB / ΔFosB immunoreactivity ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် (ပုံ 1D-G), (ကြိုတင်မဲအတွက်အလင်းပြင်းထန်မှုနှစ်ဦးစလုံး image ကိုဝယ်ယူ setting များကိုအများအပြားကဏ္ဍများကိုသုံးပြီး, အ RGB အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်လယ်ကွင်းမှတ်တိုင်, ထိတွေ့မှုအချိန်နှင့်အဖြူချိန်ခွင်လျှာ) နှင့်တံခါးခုံကိုအဆင့်ဆင့်၏အရွယ်အစား hippocampal နှင့် cortical ROIs များအတွက် optimized ခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထို့နောက် optimized အခြေအနေများ (1) အရဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ROIs (တစ်ဦး irregularly shaped အနားကရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်ပုံ 1A, B,) (2) ။ အဆိုပါပုံရိပ်အနီရောင်အရောင် (ရန် FosB / ΔFosB-ir အရေးပါကူးပြောင်းသော thresholded ခဲ့သည်ပုံ 1C-G) (3) ။ အဆိုပါ% ရွယ်ထို့နောက်အလိုအလျှောက်အဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်အောက်ပါအတိုင်း: 100 ×% ရွယ် = (ပြောင်းလဲဧရိယာ (အနီရောင်) / စုစုပေါင်းရွယ်ဧရိယာ) ။
FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏ပုံရိပ်ကိုတံခါးခုံကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ခြေလှမ်းများသရုပ်ဖော်ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ။
ဤပုံဤတံခါးခုံကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိစစ်ပေးရန်, 20 ဒေသများကျပန်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသအရွယ်အစားနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ image ကိုခုံအရေအတွက်၏အပြင်, ရွေးချယ်ထားသောဒေသများအတွင်း FosB / ΔFosB-ir အရေးပါ၏နံပါတ်ကိုယ်တိုင်ရေတွက်ခဲ့ FosB / ΔFosB-ir အရေးပါ၏သိပ်သည်းဆအဆိုပါတိုင်းတာနေဖြင့် FosB / ΔFosB-ir အရေးပါ၏နံပါတ်ခွဲဝေရယူခဲ့ပါတယ် ဧရိယာ (မီလီမီတာ2).
2.4: အ dentate gyrus အတွက် DCX-ir နုအာရုံခံ၏အရေအတွက်
Runner ကြွက်များ၏ DG အတွက် DCX-ir နုအာရုံခံကခက်ခဲအတိအကျတစ်ခု optical ဏုသုံးပြီး DCX-ir Soma ၏ discrete အရေအတွက်ကိုရေတွက်အောင်ပေါများခြင်းနှင့်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုအတွက် morphological အကဲဖြတ်ဘို့ Sholl ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ [သည့် Soma ၏ 40 μmအတွင်းတိုင်းတာသည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီ DCX-ir အာရုံခံဆဲလျ, ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ခုတည်း dendrite ရှိကြောင်းပြသ43] ။ ဒါကြောင့်အောက်ပါမူရင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ DCX-ir အာရုံခံ၏ဒေသ-တိကျတဲ့အရေအတွက် enable လုပ်ဖို့တီထွင်ခဲ့သည်။
(1) ကို GCL ၏ပုံရိပ်ကိုပုံရိပ် software နှင့်ရည်ရွယ်ချက်မှန်ဘီလူး (40) ×တစ်2သုံးပြီးကွန်ပျူတာတစ်လုံး display ကိုအပေါ် projected ခဲ့သည်။ အသက်ရှင်သောပုံရိပ်တွင်တစ်လိုင်းအစိတ်အပိုင်း (150 ± 0.1 μm) (ပု GCL ၏အလယ်တွင်တလျှောက်တွင်ရေးဆွဲခဲ့သည်ပုံ 2) (3) ။ အဆိုပါ focal အတိမ်အနက်ကိုပြောင်းခြင်း, အကြိမ်အရေအတွက်လိုင်းအစိတ်အပိုင်း (4) DCX-ir dendrites ရေတွက်ခဲ့ကြသည်ကူး။ အဆိုပါ ROIs (dorsal DGsp, dDGsp; DGip, dDGip dorsal; ventral DGsp, vDGsp; ventral DGip, vDGip) FosB / ΔFosB immunoreactivity ဆန်းစစ်ခဲ့သည်ရှိရာဒေသများ (5) မှစာအဆက်အသွယ်။ တိုင်းရွယ်မှာတော့ 2-3 လိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအပိုင်းနှုန်းရေးဆွဲခဲ့ကြခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရေအတွက်က mouse ကိုတစ်ဦးလျှင် 2-3 ကဏ္ဍများကိုကျော်ပျမ်းမျှခဲ့သည်။ အဆိုပါ GCL ၏အထူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 60-80 μmသောကွောငျ့, လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရေအတွက်ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကန့်သတ်ဒေသအတွင်း DCX-ir အာရုံခံ၏နံပါတ်ရောင်ပြန်ဟပ်သင့်ပါတယ်။
DCX-ir နုအာရုံခံပြီးလိုင်းအစိတ်အပိုင်း (150 ± 0.1 μm) ၏တစ်ဦးကကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်ကို DCX-ir dendrites နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရေအတွက်ကိုရေတွက်များအတွက်မွမ်းမံလေ၏။
3 ။ စမ်းသပ်မှု2။ ဘီးပြေးနေဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ FosB / ΔFosB isoform ၏ identification
3.1: Perfusion နှင့်တစ်ရှူးအပြောင်းအလဲနဲ့
ကြွက်တစ်ဦးအပိုဆောင်းဆောင်များတွင်စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်အထက်အဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို run ၏4ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, ကြွက် transcardially နက်ရှိုင်းသောမေ့ဆေးအောက်တွင်အအေးဆားနှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ hippocampus အလျင်အမြန်ထွက်ခွဲဖြာနှင့်အရည်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အတူအေးခဲနှင့် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ mouse ကို၏ hippocampi RIPA ကြားခံ (150 MM NaCl, 25 MM Tris-HCl သော pH 7.6, 1% NP-40, 1% ဆိုဒီယမ် deoxycholate, 0.1% SDS, #8990, Thermo သိပ္ပံ, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) protease ်အတွက် homogenized ခဲ့ကြသည် inhibitors (လုံးဝ Mini ကို, Roche, Manheim, ဂျာမနီ) ။ အဆိုပါ lysates 15 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 5000 rpm မှာ4မိဘို့ centrifuged ခဲ့ကြသည်နှင့်အ supernatants စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ပရိုတိန်းပါဝင်မှုတစ် BCA ပရိုတိန်း assay ကိရိယာအစုံ (#23227, Thermo သိပ္ပံ, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နဲ့တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။
ပရိုတိန်း၏တန်းတူပမာဏ (30 μg / လမ်းသွား) တစ်ဦး PVDF အမြှေးပါး (ကိုယ်ခံစွမ်းအား-ချေ, 10 μm, Bio-Rad, MD USA) မှလွှဲပြောင်းထို့နောက်တစ်ဦး 0.2% polyacrylamide ဂျယ်လ်အပေါ် electrophoresed ခဲ့ကြသည်။ Nonspecific စည်းနှောင် 1% BSA်TBST အတွက် 0.5 ဇ (20 M က NaCl, 7.5 MM Tris-HCl သော pH 0.1, 20% Tween-3) အတွက်အမြှေးပါး preincubating ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ 1% BSA်TBST အတွက်ဖျက်သိမ်း, immunohistochemistry ဘို့အထက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့: အဆိုပါအမြှေးပါးဒယ်အိုး-FosB antibody ကို (1000 3) နဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ အခန်းအပူချိန်မှာ 1 ဇများအတွက်: (TBST အတွက် 5000, NA934, GE Healthcare, Buckinghamshire, ဗြိတိန် 1) TBST နှင့်အရင်ဆေးပြီးနောက်ယင်းအမြှေးပါး HRP-conjugation Anti-ယုန် IgG antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ TBST နှင့်အရင်ဆေးပွီးနောကျ, ပရိုတိန်းခညျြအနှော Enhanced Chemiluminescence (အနောက်တိုင်း Lightning Plus အား-ECL, PerkinElmer MA, USA) နှင့်အတူပေါက်ဖွားအားဖြင့်မြင်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးပုံရိပ် Quant Las 4000 mini ကို (GE Healthcare, Buckinghamshire, ဗြိတိန်) ကိုသုံးပြီးဖမ်းမိခဲ့သည်။ တစ်ဦးတင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်: (TBS-T ကအတွက် 3, Trevigen, MD အမေရိကန်နိုင်ငံ #2275, 1) အမြှေးပါးထို့နောက် Anti-glyceraldehyde-5000-ဖော့စဖိတ် dehydrogenase (GAPDH) antibody ကိုအတူ reprobed ခဲ့သည်။ ပရိုတိန်းခညျြအနှောများ၏ optical သိပ်သည်းဆ Image ကို-J ကိုနှင့် GAPDH ၏အဆင့်အထိပုံမှန်သုံးပြီး quantified ခဲ့သည်။
mouse ကိုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အတွက်အပြောင်းအလဲများ Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA (အချိန်×အုပ်စုကို) ကသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး unpaired t-စမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှု (ထိန်းချုပ်ရေး vs. Runner) ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် FosB / ΔFosB immunoreactivity ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (image ကိုခုံ vs. လက်စွဲစာအုပ်ရေတွက်) မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့, FosB / ΔFosBစကားရပ်၏အဆင့်နှင့် DG အတွက် DCX လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရေအတွက်ကများအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆနျးစစျဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုများအတွက်တံခါးခုံမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် P <0.05 ။
1: စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အပြေးအကွာအဝေး
စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2အတွက်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Runner နှစ်ဦးစလုံးကြွက်၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အတွက်အပြောင်းအလဲများအတွက်ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှပြနေကြသည် ပုံ 3။ Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA အချိန်×သိသိသာသာအပြန်အလှန် (အဖွဲ့ညွှန်ပြ, F(4, 72) = 13.6, P <0.001) နှင့်အုပ်စုတစ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု F(1, 18) = 6.07, P <0.05), Runner ကြွက်များတွင်သိသိသာသာနိမ့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်ပြ။ လှောင်အိမ်တစ်ခုရဲ့ပြေးအကွာအဝေးကိုပြတယ် စားပွဲတင် 1။ ကြွက်အတူတကွသျောကြောင့်အသီးအသီး mouse ကို၏တိကျသောပြေးအကွာအဝေးမသေချာမရေရာပေမဲ့ပုံမှန်လေ့လာရေးအားလုံးကြွက်မကြာခဏဘီးပြေးဖျော်ဖြေကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု2အတွက် Runner ကြွက်မဟုတ်တော့စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်သူများထက်ပြေးပေမယ့်ယုတ်အပြေးအကွာအဝေး (ဍ / နေ့ / လှောင်အိမ်) တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးတသမတ်တည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2၏ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Runner ကြွက်၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးအတွက်အပြောင်းအလဲများ။
2: image ကိုတံခါးခုံကို အသုံးပြု. FosB / ΔFosB immunoreactivity အရေအတွက်၏အတည်ပြု
လက်စွဲရေတွက်ခြင်းဖြင့်ရရှိသော FosB / ΔFosB-ir အရေးပါ၏ပုံရိပ်ကိုတံခါးခုံနှင့်သိပ်သည်းဆအားဖြင့်ရရှိသော FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာ (r = 0.941 အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိခဲ့သည် P <00001, ပုံ 4).
3: အ hippocampus အတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity
FosB / ΔFosBအဆိုပါ dorsal အတွက် immunostaining နှင့် ventral hippocampal subfields ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေမှာပြခဲ့ကြ ပုံ 5။ Runner ကြွက်များတွင် ROIs ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှိသမျှတို့, FosB / ΔFosB immunoreactivity ခုနှစ်တွင် (ပုံ 5ညာဘက်) (ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်တွေမှာထက်သှေးမွငျ့မားခဲ့ပုံ 5, အလယ်ဗဟို) ။ Runner ကြွက်များတွင်အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် dorsal (DGsp နှစ်ဦးစလုံးအတွက် FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာထဲမှာသိသိသာသာတိုးညွှန်ပြ: P <0.01; DGip: P <0.01; CA1: P <0.05; CA3: P <0.05) နှင့် ventral hippocampal subfields (DGsp: P <0.01; DGip: P <0.05; CA1: P <0.05; CA3: P <0.05; ပုံ 6).
အဆိုပါ dorsal နှင့် ventral hippocampal ROIs အတွက် FosB / ΔFosB immunostaining ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ။
4: အ cortex အတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity
အဆိုပါ cortical ROIs အတွက် FosB / ΔFosB immunostaining ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေမှာပြနေကြသည် ပုံ 7။ ရေရှည်အပြေးနှင့်အတူ FosB / ΔFosB immunoreactivity အတွက် quantitative ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထင်ရှားဒေသ-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကို (ပုံ 8) ။ Runner ကြွက်တွေမှာ FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာ (ထိုမော်တာ cortex အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့P <0.05) နှင့် somatosensory စည် cortex (P <0.05), ဒါပေမယ့်အမြင်အာရုံ cortex အတွက် (P = 0.662) သို့မဟုတ် olfactory မီးသီး (P = 0.523) ။ ယင်းအာရုံ cortex ခုနှစ်, FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာ (Runner ကြွက်တွေမှာတိုးလာဆီသို့တော်မှာP = 0.105) ။
အဆိုပါ cortical ROIs အတွက် FosB / ΔFosB immunostaining ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ။
အဆိုပါ cortical ROIs အတွက် FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာ၏အရေအတွက်။
DCX immunostaining ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေမှာပြနေကြသည် ပုံ 9။ အဆိုပါ dorsal hippocampus ခုနှစ်, DCX immunoreactivity Runner ကြွက်တွေမှာ (ပုံ 9ညာဘက်) (ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်နှိုင်းယှဉ်သှေးမွငျ့မားခဲ့ပုံ 9,) ထားခဲ့တယ်။ အဆိုပါ dorsal hippocampus နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ventral hippocampus အတွက် DCX immunoreactivity ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Runner နှစ်ဦးစလုံးကြွက်များတွင်ဆီးအတားမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ Runner ကြွက်များတွင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်၏နံပါတ် (ထို dDGsp အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့P <0.01) နှင့် dDGip (P <0.01; ပုံ 10) ။ အဆိုပါ ventral hippocampus ခုနှစ်, Runner ကြွက်တွေအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်တော်မှာ, ဒါပေမယ့်အုပ်စုများ (vDGsp အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ခဲ့သည် P = 0.101; vDGip, P = 0.257; ပုံ 10).
အဆိုပါ dorsal နှင့် ventral DG ၏ DCX-ir immunostaining ၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေအသီးသီးထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Runner ကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲကနေရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ DG အတွက် DCX-ir နုအာရုံခံ၏အရေအတွက်။
6: FosB / ΔFosBစကားရပ်နှင့် neurogenesis အကြားညမညသဘောတရား
တစ်ဦးကဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာနှင့် DCX လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်နံပါတ် (တို့အကြားဖျော်ဖြေခဲ့သည်ပုံ 11) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေတာအစု (ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်တွေမှာဥပမာ dorsal DGsp) သာ5အားလုံးပါဝင်ပါသည်သောကြောင့်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပထမဦးဆုံးအားလုံး 40 အားလုံးနှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Intriguingly, အ FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာနှင့် DCX ဖြတ် (r = 0.885 ၏နံပါတ်တစ်ခုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိခဲ့ P <0.0001) ။ ထို့အပြင် dorsal DG (r = 0.762) တွင်သိသာသောဆက်စပ်မှုများကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ P <0.05) နှင့် ventral DG (r = 0.816, P <0.01) သီးခြားစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
FosB / ΔFosBစကားရပ်နှင့် neurogenesis အကြားဆက်စပ်မှုအသင်းအဖွဲ့။
7: ရေရှည်ပြေးနေဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ FosB / ΔFosB isoform ၏သတ်မှတ်ခြင်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၏ isoform သိရှိနိုင်ဖို့ fosB ရေရှည်ပြေးတုံ့ပြန်အတွက် hippocampus အတွက်သွေးဆောင်ဗီဇထုတ်ကုန်, ကြွက်တစ်ဦးအပိုဆောင်းဆောင်များတွင်မှအ hippocampi အတူတူဒယ်အိုး-FosB antibody ကို အသုံးပြု. နှင့်အတူအနောက်တိုင်းချေအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ΔFosB၏ပြုပြင်ထားသော isoforms ကိုယ်စားပြု 35-37 KDA ၏အကွိမျမြားစှာတပ်သား  သိသိသာသာ (ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်နှိုင်းယှဉ် Runner မှာတိုးပွားလာခဲ့သည်ပုံ 12, P <0.01) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, 48 kDa FosB isoform မည်သည့်အုပ်စုတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 25kDa အထက်မှမြင်နိုင်သောအခြားတီးဝိုင်းတစ်ခုသည်Δ2ΔFosB isoform (27 kDa) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အခြားအချည်အနှောင် ၂ ခု၊ အထက် ၅၀ kDa နှင့် ၃၇ kDa တို့ရှိကြသည်။ ၎င်းမှာအထူးသီးသန့်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ quantified သောအခါအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုအုပ်စုများအကြားကဤ Non-osFosB ခညျြအနှော (ဒေတာကိုပြမပြပါ) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၏ isoforms ၏ identification အ fosB ရေရှည်ပြေးနေဖြင့်သွေးဆောင်ဗီဇထုတ်ကုန်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပထမဦးဆုံးရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးအဆိုပါ hippocampus အတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ် induces ရှိမရှိ) 1 ဆန်းစစ်ဖို့ immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေ; နှင့် 2) ဒေသတစ်တိကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုက၎င်း၏ dorso-ventral ဝင်ရိုးတလျှောက်တွင်တည်ရှိခြင်းရှိမရှိ။
မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးလေးပတ် hippocampal ဒေသအားလုံးအတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity အတွက်သိသိသာသာတိုးသွေးဆောင်ခြင်း (hippocampus ၏ dorsal နှင့် ventral ဝေမျှနှစ်ဦးစလုံး၏ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါ DG, CA1 နှင့် CA3 subfields) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျနော်တို့ 35-37kDa ΔFosB isoform အဓိကခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် fosB ရေရှည်ပြေးတုန့်ပြန်စုဆောင်းဗီဇထုတ်ကုန်။ ဤရလဒ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာရေရှည်ပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် hippocampus တစ်လျှောက်လုံးΔFosBသော induction များအတွက်အစွမ်းထက်ခလုတ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏သော induction dorsal အမျိုးမျိုးနှင့် / သို့မဟုတ် ventral hippocampus-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကျိုးသက်ရောက်လေ့ကျင့်ခန်းအရာအားဖြင့်တစ်ဦးဝတ္ထုမော်လီကျူးယန္တရားဖြစ်အံ့သောငှါသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
1: image ကိုတံခါးခုံကို အသုံးပြု. FosB / ΔFosB immunoreactivity quantifying ၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်ကန့်သတ်
ကျယ်ပြန့်ပစ်မှတ်ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်အဘို့နှင့်ဆဲလ် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အကဲဖြတ်ဘို့ immunohistochemical လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြု an image ကိုခုံ technique ကို, [FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏ဒေသ-တိကျတဲ့အရေအတွက်အဘို့ဤလေ့လာမှုမှာမွေးစားခဲ့သည်15,45,46] ။ image ကိုခုံအားဖြင့်၎င်း, လက်စွဲစာအုပ်ရေတွက်ခြင်းဖြင့် quantified FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏အဆင့်ဆင့်အကြားတစ်ဦးကသိသိသာသာဆက်စပ် (သရုပ်ပြခဲ့သည်ပုံ 4) ။ အလွန်ထူထပ်သောoverရိယာများတွင် FosB / osFosB-ir နျူကလိယအရေအတွက်ကိုရေတွက်။ မရသောကြောင့်သိပ်သည်းဆနှင့်ထပ်တူကျခြင်းသည် FosB / osFosB-ir areasရိယာစုစုပေါင်း ROI ၏ <~ ၄၀% ကိုကိုယ်စားပြုသောအခါသရုပ်ပြဆက်စပ်မှုကသာ ရိယာ။ ထို့ကြောင့် FosB / osFosB-ir ဒေသများရှိစုစုပေါင်း ROI ofရိယာ၏ ၄၀% အတွက်သေချာစွာအနက်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
အထူးသဖြင့်, Runner ကြွက်များ၏ DG (ထဲမှာပုံ 4), FosB / ΔFosBစကားရပ်သည်အလွန်ဘီးပြေးနေဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် FosB / ΔFosB-ir အရေးပါအများစုခေခဲ့ပါတယ်။ ဤဒေသများအတွက်, FosB / ΔFosBထုတ်ဖော်တိုးပွားလာသော induction မသက်ဆိုင် (image ကိုခုံသို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်ရေတွက်) အသုံးပြုတဲ့အရေအတွက်နည်းလမ်း၏, စကားရပ်များ၏အဆင့်ပိုကြီးတဲ့အထင်သေးစေပါတယ်။ သို့သော်အထင်သေး၏အန္တရာယ်ကြားမှကလက်ရှိလေ့လာမှုကိုအောင်မြင်စွာ Runner ကြွက်များ၏ DG အတွက် FosB / ΔFosB-ir ဧရိယာထဲမှာသိသိသာသာတိုးသရုပ်ပြသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာအတိုင်းအတာများကန့်သတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အလျှော့ပေးလိုက်လျောဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အဲဒီအစားအလားအလာအထင်သေးရေရှည်ပြေးအဆိုပါ hippocampus အတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity တိုးပွားလာသောတွေ့ရှိချက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးပွားစေပါသည်။
2: ရေရှည်ပြေးအားဖြင့် hippocampus အတွင်းΔFosB၏ Uniform induction
အဆိုပါ hippocampus [ယင်း၏ longitudinal ဝင်ရိုးတလျှောက်တွင်ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ gradients ရှိပါတယ်26] ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများအတွက် hippocampus ၏ dorsal နှင့် ventral ဝေမျှအတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity သီးခြားစီဆန်းစစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်။ အဆိုပါဒေတာကိုတစ်ပုံစံတည်းပြေးရေရှည်တိုင်းတာအားလုံး hippocampal ROIs အတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ FosB / ΔFosB immunoreactivity ဒီယူနီဖောင်းသော induction Non-အထူးသရေရှည်ပြေးနဲ့ဆက်စပ်စနစ်တကျဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့ cortex အတွက် FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏ဒေသ-တိကျတဲ့တိုးရှိခဲ့သည်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤရလဒ် [ပြေးစက်ပြေးတစ်ဦးစူးရှရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဟာ hippocampus အတွက်, ဒါပေမယ့်မ olfactory မီးသီးအတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွားလာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံနေသည်8] ။ ထို့အပွငျ Rhodes et al ။ (2003) [မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီး၏7ရက် DG နှင့် hippocampus ၏ CA2 /3အတွက်သွေးဆောင်က c-Fos စကားရပ် running ကြောင်းသရုပ်ပြ (CA1 တိုင်းတာမဟုတ်ခဲ့) နှင့်အာရုံခံ cortex အတွက်, ဒါပေမယ့်မအမြင်အာရုံ cortex အတွက်47] ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှု hippocampus အတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်၏ယူနီဖောင်းသော induction ရေရှည်ပြေး၏ non-တိကျတဲ့အကျိုးဆက်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ Hawley et al ။ မကြာသေးမီကနာတာရှည်ခန့်မှန်းရခက်စိတ်ဖိစီးမှုဟာ dorsal အတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်တိုးလာပေမယ့်မ ventral အတွက်, DG ကြွက် hippocampus ၏အစီရင်ခံ  ။ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းသောသူတို့သည်အဖြစ် FosB / ΔFosBသော induction များ၏ကွဲပြားပုံစံများဟာ hippocampus အပေါ်နှိုးဆွ-မှီခိုသက်ရောက်မှုသို့ဆက်လက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးလိမ့်မယ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့မူလတန်းကျောင်းဒယ်အိုး-FosB antibody ကို FosB ပရိုတိန်းအပေါငျးတို့သ isoforms အသိအမှတ်ပြုရန်လူသိများသည်။ အနောက်ပိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်သို့ကျနော်တို့ [ရေရှည်ပြေးပြီးနောက် hippocampus အတွက်တိုးပွားလာကြောင်းတည်းသော isoforms, Fos မိသားစုပရိုတိန်းတို့တွင်သာတည်ငြိမ် isoforms ΔFosB (35-37 KDA) ၏ပြုပြင်ထားသော isoforms ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်11] ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် 35-37 KDA ΔFosBနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်သွေးဆောင်မြင်သာထင်သာ Fos မိသားစုပရိုတိန်းကြောင်းပြသရန်ဒယ်အိုး-Fos antibody ကို အသုံးပြု. ယခင်အလုပ်နှင့်အညီဖြစ်ပါသည်  ။ ဒါကွောငျ့ရေရှည်အများဆုံးဖွယ်ရှိပြေးနေဖြင့်ဤနေရာတွင်သွေးဆောင် hippocampal FosB / ΔFosB immunoreactivity အတွက်တိုးΔFosBများ၏အဆင့်ကိုထင်ဟပ်။
လျော့နည်း hippocampus ၏မော်လီကျူးများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရှုထောင့်အပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏ဒေသ-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ သို့သော်မြောက်မြားစွာအပြုအမူလေ့လာမှုများ dorsal နှင့် ventral hippocampal လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေတိုးတက်မှုအဘို့ကြီးစွာသောအလားအလာဖော်ပြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း [Spatial သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး34-38] နှင့် Spatial နှင့်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဓိကအား [သည့် dorsal hippocampus အပေါ်မူတည်27,28] ။ ဆနျ့ကငျြ, လေ့ကျင့်ခန်းလည်း [anxiolytic နှင့်လက္ခဏာဂုဏ်သတ္တိများကွိုးစားအားထုမှလူသိများသည်24,25,38] ဤစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုအများစုအတွက် ventral hippocampus နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည် [29,30] ။ ဤလေ့လာမှုတွင်တွေ့မြင်ရေရှည်ပြေးနေဖြင့်ΔFosB၏ယူနီဖောင်းသော induction neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုအချို့ကိုပုံစံတစ်ခုလုံးကို hippocampus တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း dorsal နှင့် ventral hippocampus-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီအကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်။
3: လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis ၏ဒေသကြီး-တိကျတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အဆိုပါ dorsal နှင့် ventral hippocampus အကြား neurogenesis ၏တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ dissociation လည်း [တိုးမြှင့်အာရုံကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး49] ။ ဤလေ့လာမှု၌, DCX-ir နုအာရုံခံ၏ morphological ဝိသေသလက္ခဏာများ၏အားသာချက်ကိုယူပြီး  ကျနော်တို့ DCX-ir dendrites နှင့် GCL ၏အလယ်တွင်တလျှောက်ရေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းအစိတ်အပိုင်းအကြားလမ်းဆုံများ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်။ ဤသည်တိုင်းတာခြင်းဟာ DG အတွက် DCX-ir အာရုံခံ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကမပေးခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူက (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) FosB / ΔFosBစကားရပ်ဒေတာနဲ့ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပို့ချများအတွက်လိုအပ်သောဒေသ-တိကျတဲ့အရေအတွက် enabled ။ ရေရှည်ပြေးပြီးနောက် DCX-ir အာရုံခံ၏နံပါတ်သိသိသာသာသည် ventral DG အဆိုပါ dorsal အတွက်တိုးလာပေမယ့်မပေး။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ DG ၏ ventral သောအဘို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သည့် dorsal အတွက်ပိုပြီးသိသိသာသာ neurogenesis လှုံ့ဆော်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများ [ဘီးပြေးအဆိုပါ dorsal နှင့် ventral DG နှစ်ဦးစလုံးအတွက် neurogenesis တိုးပွားလာသောကွဲလွဲသောရလဒ်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ50,51] ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ ventral DG အတွက် DCX-ir လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရေအတွက်သေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစား (အုပ်စုတစ်စုနှုန်း5ကြွက်) အုပ်စုများအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် detect လုပ်နိုင်စွမ်းကန့်သတ်ထားစေသော်လည်း, ပြေးနှင့်အတူတိုးမြှင့်ဖို့တော်မှာ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အချိန်မတန်မီမိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေး ventral hippocampal neurogenesis လှုံ့ဆော်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်လေ့လာမှုတွေက၎င်း၏ multistep ဖြစ်စဉ်ကို (ဆဲလ်ပြန့်ပွား, ကွဲပြားခြားနားမှု, ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ရှင်သန်မှု) နှင့် ပတ်သက်. စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis ၏ဒေသ-specific နားလည်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
4: hippocampal plasticity ထိန်းညှိဘို့လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေΔFosBသော induction ၏ Functional ဂယက်ရိုက်
နောက်ဆုံးတွင် hippocampus အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေΔFosBသော induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေအသိအမှတ်ပြုအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ကျနော်တို့ dorsal နှင့် ventral DG နှစ်ဦးစလုံးအတွက် DCX-ir လက်ဝါးကပ်တိုင် FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏ဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်နှင့်အကြားသိသာထင်ရှားသော, အပြုသဘောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ နှစ်ခု variable တွေကို။ ΔFosBလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis ထိန်းညှိပေးသောအားဖြင့်အတိအကျယန္တရားများမသေချာရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကြောင်းသရုပ်ပြ fosBFosB, ΔFosBနှင့်Δ2ΔFosBကင်းမဲ့ရာ -null ကြွက်, (အပေါငျးတို့သ fosB ထုတ်ကုန်), [မွေးကင်းစအာရုံခံ၏ ectopic ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော DG အဆောက်အဦများတိုးတက်အာရုံခံ progenitor ဆဲလ်လျော့နည်းသွားပြန့်ပွားအပါအဝင် Basal hippocampal neurogenesis အတွက်လိုငွေပြမှုပြ20] ။ သို့သော်ဤပွောငျးလဲအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ် fosB(ဃ / ဃ) FosB ကင်းမဲ့ရာကြွက်, မဟုတ်ΔFosB / Δ2ΔFosB။ စိတ်ဝင်စားစရာအတွက် fosB-null ကြွက်အချို့ neurogenesis-related မျိုးဗီဇ၏စကားရပ်အပါအဝင် Vgf (VGF တွင် nerve growth factor သွေးဆောင်) နှင့် ဂလ (Galanin prepropeptide) [downregulated ခဲ့ကြသည်20] ။ VGF နှင့် Gal အတွင်းသို့မော်လီကျူးများဖြစ်ကြပြီးကတည်းကဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရရှိထားသူဖြစ်သောတဦးတည်းအဆိုပြုချက်ကို [ΔFosBဖော်ပြအာရုံခံ autocrine / paracrine လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့် neurogenesis ထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါစဉ်းစား20].
ထို့အပြင်သူကΔFosB Spatial ပြေးနေဖြင့်သွေးဆောင်ရာဒေသ• Neurogenic disease အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသည်ရှိရာဒေသနှင့်ထပ်သတိပြုရပါမည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis နိမ့်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု-မှီခိုမှာကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အာရုံခံ activation ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် function ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်  ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) ၏စကားရပ်များနှင့်ဖြန့်ချိအပါအဝင်ယန္တရားများမှတဆင့် [52,53] ထိုအသွေး-ဦးနှောက်အတားအဆီးမှတဆင့်သွေးရည်ကြည်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်-1 (IGF-1) ၏လွှာမှ [54,55] apoptosis ၏ဖိနှိပ်မှု  နှင့် mitochondrial Motilal ၏စည်းမျဉ်း  ။ ထို့ကွောငျ့, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရေရှည်လေ့ကျင့်ခန်းအလားအလာအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဤမျိုးစုံယန္တရားများမှတဆင့် hippocampal plasticity တိုးမြှင့်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သောတိုးလာΔFosBစကားရပ်ထဲမှာထင်ရှား, အထပ်ထပ်အာရုံခံ activation ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှသာလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis နှင့် DG အတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်နှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်။ သို့သော် FosB / ΔFosB immunoreactivity ကိုလည်း CA1 နှင့် CA3 subfields အတွက်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကဤ subfields အတွင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေΔFosBစကားရပ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍပိုမိုနားလည်မှုရရှိရန်လိုအပ်သည်နေစဉ်, ယခင်စာပေအလားအလာဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားပါတယ်။ ဂွမ် et al ။ (2011) ကို CA5 သို့မဟုတ် CA5 ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက် cyclin-မှီခို kinase 1 (Cdk3) ၏တိကျသော ablation [အသီးသီးမှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးသို့မဟုတ်ပြန်လည်ရယူခြင်းချို့ယွင်းကြောင်းသရုပ်ပြ58] ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ Cdk5 [ΔFosB၏မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်59] နှင့် Synaptic plasticity ထိန်းညှိအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်  ။ ထို့ကြောင့်, လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေΔFosBစကားရပ် CA5 နှင့် CA1 subfields အတွက် Cdk3 activation မှတဆင့် Synaptic plasticity ထိန်းညှိတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း၏စူးရှသောအကြိမ်ကြိမ်အဆိုပါ hippocampus အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇပရိုတိန်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးသွေးဆောင်လူသိများခဲ့ကြသည်နေစဉ်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရေရှည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းသိသိသာသာတစ်ခုလုံးကို hippocampus အတွက်ΔFosBစကားရပ် induces သောပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ thΔFosB၏ယူနီဖောင်းသော induction လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံ hippocampal လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်စေရန်တတ်နိုင်ထိရောက်သော Non-pharmacological ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင်းလက်ရှိနားလည်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ အတူတူ FosB / ΔFosBစကားရပ်နှင့် neurogenesis အကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုနှင့်အတူဤဒေတာကိုလိုက်စားဖြစ်ကြပြီး neurogenesis အပါအဝင် hippocampal function ကိုအပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကို delineating ထပ်မံလေ့လာမှုများ, များအတွက်လိုအပ်ဖော်ပြသည်။
ဒီလေ့လာမှုက TN (#23700775) မှတစ်ဦးကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်-Aid ကို Grant က-ယဉ်ကျေးမှု, အားကစား, ဂျပန်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1 ။ Dishman RK, Berthoud HR, Booth အက်ဖ်ဒဗလျူ, Cotman CW, Edgerton VR et al ။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ (2006) Neurobiology ။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 14: 345-356 ။10.1038 / oby.2006.46 PubMed: 16648603။ [PubMed]
2. Foster PP, Rosenblatt KP, Kuljis RO (2011) လေ့ကျင့်ခန်း - သွေးဆောင်သိမြင်မှုဆိုင်ရာပလတ်စတစ်၊ ရှေ့ Neurol 2: 28 PubMed: 21602910။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Pereira AC အ, Huddleston DE, Brickman လေး, Sosunov AA ကို, Hen R ကို et al ။ (2007) ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူ dentate gyrus အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေ neurogenesis တစ်ခုအတွက် Vivo Correlate ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 104: 5638-5643 ။10.1073 / pnas.0611721104 PubMed: 17374720။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ နိုင်ကြောင်း KI, Voss မဂ္ဂါဝပ်, Prakash သည် RS, Basak ကို C, Szabo တစ်ဦးက et al ။ (2011) လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေး hippocampus ၏အရွယ်အစားကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 108: 3017-3022 ။10.1073 / pnas.1015950108 PubMed: 21282661။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ Lee က TH, ဂျန် MH, ရှင် MC, Lim က BV ကင်မ် YP et al ။ လေ့ကျင့်ခန်း၏ပြင်းထန်မှုနဲ့ကြာချိန်ပေါ်ကြွက် hippocampal က c-Fos စကားရပ်၏ (2003) မူတည်တယ်။ ဘဝကသိပ္ပံ 72: 1421-1436 ။10.1016/S0024-3205(02)02406-2 PubMed: 12527039။ [PubMed]
6 ။ Clark က PJ, Bhattacharya TK, Miller က DS, အသစ်နှင့် Pre-တည်ဆဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူ mouse ကို hippocampal granules အာရုံခံအတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေး၏စူးရှသောအကြိမ်ကြိမ်ထံမှက c-Fos, Zif2011 နှင့် Arc ၏ Rhodes JS (268) induction ။ neuroscience 184: 16-27 ။10.1016 / j.neuroscience.2011.03.072 PubMed: 21497182။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ Oladehin တစ်ဦးကစူးရှသောအလယ်အလတ်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအောက်ပါကြွက် hippocampus ၌ရေသည် RS Fos ပရိုတိန်းစကားရပ်၏ (2001) တည်နေရာနှင့်ဖြန့်ဖြူး။ Exp ဦးနှောက် Res 137: 26-35 ။10.1007 / s002210000634 PubMed: 11310169။ [PubMed]
8 ။ Nishijima T က, Okamoto က M, Matsui T က, Kita ငါ NMDA အဲဒီ receptor / အပျော့စားလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာကြွက်များတွင် NO အချက်ပြကကမကထပြုခဲ့ Soya H ကို (2012) Hippocampal အလုပ်လုပ်တဲ့ hyperemia ။ J ကို Apple က Physiol (1985) 112: 197-203 ။10.1152 / japplphysiol.00763.2011 PubMed: 21940846။ [PubMed]
9 ။ ခေါင်းလောင်း KF, Hardingham GE (2011) အာရုံခံကျန်းမာရေးအပေါ် Synaptic လှုပ်ရှားမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Curr Opin Neurobiol 21: 299-305 ။10.1016 / j.conb.2011.01.002 PubMed: 21292474။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Tulchinsky အီး (2000) Fos မိသားစုဝင်များ: oncogenic အသွင်ပြောင်းအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခန်းကဏ္ဍ။ Histol Histopathol 15: 921-928 PubMed: 10963134။ [PubMed]
11 ။ Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW (2001) DeltaFosB: စွဲတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 98: 11042-11046 ။10.1073 / pnas.191352698 PubMed: 11572966။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Chen က J ကို, Kelz ကို MB, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nakabeppu Y ကို, Nestler EJ (1997) နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင် deltaFosB ၏တည်ငြိမ်မျိုးကွဲ။ J ကို neuroscience 17: 4933-4941 PubMed: 9185531။ [PubMed]
13 ။ Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, Carl-Florence TL, Chakravarty S ကို et al ။ (2008) သဘာဝကဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို neuroscience 28: 10272-10277 ။10.1523 / JNEUROSCI.1531-08.2008 PubMed: 18842886။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ် et al ။ (2006) မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB ဘို့တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience 9: 205-211 ။10.1038 / nn1636 PubMed: 16415864။ [PubMed]
15 ။ Kaplan GB ကို, Leite-မောရစ် Ka, ဝါသနာရှင် W က, Young က AJ, Guy MD (2011) Opiate ာင်း prefrontal cortical, striatal နှင့် amygdala ဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB / DeltaFosB စကားရပ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ PLOS ONE 6: e23574 ။10.1371 / journal.pone.0023574 PubMed: 21886798။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Teegarden SL, ဘေးလ် TL (2007) အစားအသောက် preference ကိုအသီးအနှံအတွက်နည်းချင်နည်းအစားအသောက် relapse အဘို့အစိတ်ပိုင်းများနှင့်စွန့်စားမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 61: 1021-1029 ။10.1016 / j.biopsych.2006.09.032 PubMed: 17207778။ [PubMed]
17 ။ အိုး KK, Vialou V ကို, Nestler EJ, Laviolette SR, Lehman MN et al ။ (2013) သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု key ကိုဖျန်ဖြေအဖြစ် DeltaFosB နှင့်အတူဘုံအာရုံကြော plasticity ယန္တရားများအပေါ်ပြုမူ။ J ကို neuroscience 33: 3434-3442 ။10.1523 / JNEUROSCI.4881-12.2013 PubMed: 23426671။ [PubMed]
18 ။ Werme M က, Messer ကို C, Olson L ကို, Gilden L ကို, Thorén P ကို ​​et al ။ (2002) မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 22: 8133-8138 PubMed: 12223567။ [PubMed]
19 ။ Greenwood BN, Foley TE, Le တီဗီ, ခိုင်ခံ့ PV, Loughridge AB et al ။ (2011) Long-term မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးကြိုးနှင့် mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအတွက် plasticity ထုတ်လုပ်သည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 217: 354-362 ။10.1016 / j.bbr.2010.11.005 PubMed: 21070820။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Yutsudo N ကို, Kamada T က, Kajitani K ကို Nomaru H ကို, Katogi တစ်ဦးက et al ။ (2013) fosB-Null ကြွက်တွေကစိတ်ကျရောဂါအပြုအမူနှင့်အတူချို့တဲ့အရွယ်ရောက် Hippocampal Neurogenesis နှင့်သဘောဆောင်သောဝက်ရူးပြန်ရောဂါတင်ပြပါ။ Neuropsychopharmacology, 38: 895-906 PubMed: 23303048။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Ohnishi yn, Ohnishi YH, Hokama M က, Nomaru H ကို, Yamazaki K သည် et al ။ (2011) FosB စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်များတိုးမြှင့်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်နှင့် DeltaFosB အားဖြင့် locomotor ာင်း antagonizes ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 70: 487-495 ။10.1016 / j.biopsych.2011.04.021 PubMed: 21679928။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Okamoto က M, ဟိုကျိုမျိုး Y ကို, Inoue K သည်, Matsui T က, Kawato S ကို et al ။ (2012) အပျော့စားလေ့ကျင့်ခန်း neurogenesis ၏အန်ဒရိုဂျင်ဖျန်ဖြေခြင်းအဘို့အသက်သေအထောက်အထားပေး hippocampus အတွက် dihydrotestosterone တိုးပွားစေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 109: 13100-13105 ။10.1073 / pnas.1210023109 PubMed: 22807478။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ ဗန် Praag H ကို, Kempermann, G, Gage FH (1999) အပြေးအရွယ်ရောက် mouse ကို dentate gyrus အတွက်ဆဲလ်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် neurogenesis တိုးပွားစေပါသည်။ နတ် neuroscience 2: 266-270 ။10.1038 / 6368 PubMed: 10195220။ [PubMed]
24 ။ Greenwood BN, Foley TE, နေ့ HE, Campisi J ကို, Hammack SH et al ။ dorsal raphe serotonergic အာရုံခံ၏အခန်းကဏ္ဍ: (2003) FreeWheel ပြေးတားဆီးအကူအညီမဲ့ / အမူအကျင့်စိတ်ကျရောဂါသင်ယူခဲ့တယ်။ J ကို neuroscience 23: 2889-2898 PubMed: 12684476။ [PubMed]
25 ။ Bjørnebekkတစ်ဦးက, သင်္ချာ AA ကို, Brené S ကို (2005) running ၏လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုမို hippocampal ဆဲလ်ပြန့်ပွားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ int J ကို Neuropsychopharmacol 8: 357-368 ။10.1017 / S1461145705005122 PubMed: 15769301။ [PubMed]
26 ။ Fanselow က MS သည် Dong HW (2010) ကို dorsal နှင့် ventral hippocampus function ကွဲပြားအဆောက်အဦများဖြစ်ပါသလား အာရုံခံဆဲလျ 65: 7-19 ။10.1016 / j.neuron.2009.11.031 PubMed: 20152109။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ ရည်ညွှန်းတဲ့အတွင်း-ဘာသာရပ်, အတွင်း-တာဝန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်: အ dorsal နှင့်ကြွက်များ၏ Spatial သင်ယူမှုစွမ်းရည်အတွက် ventral hippocampus အကြား function ကို၏ Pothuizen နာရီ, Zhang က WN, Jongen-Rêlo AL, Feldon J ကို, ရီကယ် (2004) Dissociation Spatial မှတ်ဉာဏ်။ EUR J ကို neuroscience 19: 705-712 ။10.1111 / j.0953-816X.2004.03170.x PubMed: 14984421။ [PubMed]
28 ။ တခုအီးတခုကို MB, Andersen က: P (1993) Spatial သင်ယူမှုချို့ယွင်း dorsal hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ပြင်းအားမှုနဲ့အပြိုင်, ဒါပေမယ့် ventral ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါခဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience 13: 3916-3925 PubMed: 8366351။ [PubMed]
29 ။ Bannerman DM, Grubb M က, သင်းထောက် RM, ရီကယ်လာ, Feldon J ကို et al ။ (2003) Ventral hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်စိုးရိမ်စိတ်ပေမယ် Spatial မဟုတ်သင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 139: 197-213 ။10.1016/S0166-4328(02)00268-1 PubMed: 12642189။ [PubMed]
30 ။ McHugh SB, သင်းထောက် RM, Rawlins ဖြစ်မှု, Bannerman DM (2004) Amygdala နှင့် ventral hippocampus ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်များယန္တရားများမှ differential ကူညီသည်။ ပြုမူနေ neuroscience 118: 63-78 ။10.1037 / 0735-7044.118.1.63 PubMed: 14979783။ [PubMed]
31 ။ Snyder JS, Ramchand P ကို, Rabbett S က, Radik R ကို, Wojtowicz JM et al ။ 2011 လအရွယ်ကြွက်များတွင် neurogenesis နှင့်လှုပ်ရှားမှု (13) Septo-ယာယီ gradients ။ 32-1149: 1156 အိုမင်းခြင်းဟာ Neurobiol ။10.1016 / j.neurobiolaging.2009.05.022 PubMed: 19632743။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis နှင့်လှုပ်ရှားမှု Snyder JS, Radik R ကို, Wojtowicz JM, ကင်မရွန် HA (2009) Anatomical gradients: အ ventral dentate gyrus အတွက်နုပျိုအာရုံခံရေဝင်္လေ့ကျင့်ရေးများက activated နေကြသည်။ Hippocampus 19: 360-370 ။10.1002 / hipo.20525 PubMed: 19004012။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Vann SD, Brown ကမီဂါဝပ်, Erichsen JT, Aggleton JP (2000) Fos ပုံရိပ်ကွဲပြားခြားနားသော Spatial မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုတုံ့ပြန်ကြွက်များတွင် hippocampal နှင့် parahippocampal subfield activation ၏ differential ကိုပုံစံများဖော်ပြသည်။ J ကို neuroscience 20: 2711-2718 PubMed: 10729352။ [PubMed]
34 ။ Lee က MC, Okamoto က M, လျူ YF, Inoue K သည်, Matsui T က et al ။ (2012) တိုတောင်းသောအကွာအဝေးနှင့်အတူအပြေးမိမိဆန္ဒအလျောက်ခုခံ hippocampal BDNF အချက်ပြနှင့်ဆက်စပ်သော Spatial မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Apple က Physiol (1985) 113: 1260-1266 ။10.1152 / japplphysiol.00869.2012 PubMed: 22936723။ [PubMed]
35 ။ ဗန် Praag H ကို, ခရစ် BR, Sejnowski တီဂျေ, Gage FH (1999) အပြေးကြွက်တွေမှာ neurogenesis, သင်ယူမှုနှင့်ရေရှည်အလားအလာပိုကောင်းစေပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 96: 13427-13431 ။10.1073 / pnas.96.23.13427 PubMed: 10557337။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Anderson က BJ, Rapp DN, Baek DH, McCloskey DP, Coburn-Litvak PS et al ။ (2000) လေ့ကျင့်ခန်းဟာ radial လက်မောင်းဝင်္အတွက် Spatial သင်ယူမှုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Physiol ပြုမူနေ 70: 425-429 ။10.1016/S0031-9384(00)00282-1 PubMed: 11110995။ [PubMed]
37 ။ Berchtold NC, Castello N ကို, Cotman CW (2010) လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖို့အချိန်-မှီခိုအကြိုးခံစားခှငျ့။ neuroscience 167: 588-597 ။10.1016 / j.neuroscience.2010.02.050 PubMed: 20219647။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Spatial သင်ယူမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏ Trejo JL, Llorens-Martin သင်္ဘော MV, တောရက်စ်-Alemánငါ (2008) ကသက်ရောက်မှု hippocampal neurogenesis နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ခု IGF-I-မှီခိုယန္တရားကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Mol ဆဲလ် neuroscience 37: 402-411 ။10.1016 / j.mcn.2007.10.016 PubMed: 18086533။ [PubMed]
39 ။ Stranahan လေး, Khalil: D, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး (2006) လူမှုအထီးကျန်မှုတွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis အပေါ် running ၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုနှောင့်နှေး။ နတ် neuroscience 9: 526-533 ။10.1038 / nn1668 PubMed: 16531997။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ Couillard-Despres S က, Winner B, Schaubeck S က, Aigner R ကို, Vroemen M က et al ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်အတွင်းရှိ (2005) Doublecortin စကားရပ်အဆင့်ဆင့် neurogenesis ရောင်ပြန်ဟပ်။ EUR J ကို neuroscience 21: 1-14 ။10.1111 / j.1460-9568.2004.03813.x PubMed: 15654838။ [PubMed]
41 ။ Rao ကက MS, doublecortin ၏ Shetty က AK (2004) ထိရောက်မှုအရွယ်ရောက် dentate gyrus အတွက်အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အာရုံခံ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာနံပါတ်နှင့် dendritic တိုးတက်မှုနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အမှတ်အသားအဖြစ်။ EUR J ကို neuroscience 19: 234-246 ။10.1111 / j.0953-816X.2003.03123.x PubMed: 14725617။ [PubMed]
42 ။ Franklin KBJ, Paxinos, G (2007) Stereotaxic Coordinates အတွက်ကြွက်ဦးနှောက်။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
43 ။ Revest JM, Dupret: D, Koehl M က, Funk-ပြောဆိုလိုက်တာပါကို C, Grosjean N ကို et al ။ (2009) အရွယ်ရောက် hippocampal neurogenesis စိုးရိမ်စိတ်-related အပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 14: 959-967 ။10.1038 / mp.2009.15 PubMed: 19255582။ [PubMed]
44 ။ Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG, Barrot M က, Monteggia L ကို et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ (2004) induction ။ J ကို neuroscience 24: 10594-10602 ။10.1523 / JNEUROSCI.2542-04.2004 PubMed: 15564575။ [PubMed]
45 ။ Tynan RJ, Naicker S က, Hinwood M က, Nalivaiko အီး, Buller KM et al ။ (2010) နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ဖိစီးမှု-တုံ့ပြန်မှုဦးနှောက်ဒေသများအနက်အချို့သာလျှင်အတွက် microglia ၏သိပ်သည်းဆနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက်ပြုမူနေကိုယ်ခံစွမ်းအား 24: 1058-1068 ။10.1016 / j.bbi.2010.02.001 PubMed: 20153418။ [PubMed]
46. ​​Frenois F၊ Moreau M၊ O'Connor J, Lawson M, Micon C et al ။ (2007) Lipopolysaccharide စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပြိုင်ကြောင်း, mouse ကိုတိုးချဲ့ amygdala, hippocampus နှင့် hypothalamus အတွင်းနှောင့်နှေး FosB / DeltaFosB immunostaining သွေးဆောင်။ Psychoneuroendocrinology 32: 516-531 ။10.1016 / j.psyneuen.2007.03.005 PubMed: 17482371။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47 ။ Rhodes JS, ပန်းကုံး T ကဂျူနီယာ Gammie SC (2003) မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီး-running အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများ။ ပြုမူနေ neuroscience 117: 1243-1256 ။10.1037 / 0735-7044.117.6.1243 PubMed: 14674844။ [PubMed]
48 ။ Hawley DF, နာတာရှည်ခန့်မှန်းရခက်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ hippocampus ၏ Leasure JL (2012) တိုင်းဒေသကြီး-တိကျတဲ့တုံ့ပြန်မှု။ Hippocampus 22: 1338-1349 ။10.1002 / hipo.20970 PubMed: 21805528။ [PubMed]
49 ။ Kheirbek MA, ventral hippocampal neurogenesis vs Hen R ကို (2011) Dorsal: သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ခံစားချက်အဘို့အဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology 36: 373-374 ။10.1038 / npp.2010.148 PubMed: 21116266။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ Bednarczyk MR, Aumont တစ်ဦးက, Décary S က, Bergeron R ကို, ဖာနန်ဒက်စ KJ (2009) အချိန်ကြာမြင့်စွာမိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီး-ပြေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူ CD1 ကြွက်များ၏ hippocampus နှင့် forebrain အတွက်အာရုံကြောရှေ့ကိုလှုံ့ဆျော။ Hippocampus 19: 913-927 ။10.1002 / hipo.20621 PubMed: 19405143။ [PubMed]
51 ။ လျူ J ကို, Somera-Molina KC, Hudson RL, Dubocovich ML (2013) တိုနင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ C3H / ကြက်ကြွက် hippocampus ၏ dentate gyrus အတွက်ဘီး-သွေးဆောင် neurogenesis running potentiates ။ J ကို Pineal Res 54: 222-231 ။10.1111 / jpi.12023 PubMed: 23190173။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
52 ။ Matsuda N ကို, Lu H ကို, Fukata Y ကို, Noritake J ကို, Gao H ကို et al ။ (2009) axon နှင့် dendrite ကနေဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်များ၏လှုပ်ရှားမှု-မှီခို Secret Differential ။ J ကို neuroscience 29: 14185-14198 ။10.1523 / JNEUROSCI.1863-09.2009 PubMed: 19906967။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Ernfors P ကို, Bengzon J ကို, Kokaia Z ကို, Persson H ကို, Lindvall အို (1991) epileptogenesis kindling စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာ neurotrophic အချက်များများအတွက်တမန် RNAs ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်။ အာရုံခံဆဲလျ 7: 165-176 ။10.1016/0896-6273(91)90084-D PubMed: 1829904။ [PubMed]
54 ။ Nishijima T က, Piriz J ကို, Duflot S က, ဖာနန်ဒက်ဇ AM, Gaitan, G et al ။ (2010) အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု drives တွေကိုပု CNS သို့သွေးရည်ကြည်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်-ငါ၏သွေးသည်ဦးနှောက်-အတားအဆီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီ။ အာရုံခံဆဲလျ 67: 834-846 ။10.1016 / j.neuron.2010.08.007 PubMed: 20826314။ [PubMed]
55 ။ ဖာနန်ဒက်ဇ AM, တောရက်စ်-Alemánငါ (2012) ကဦးနှောက်ထဲမှာအချက်ပြအင်ဆူလင်ကဲ့သို့သော peptide ၏များစွာကိုမျက်နှာများ။ နတ်ဗြာ neuroscience 13: 225-239 ။10.1038 / nrn3209 PubMed: 22430016။ [PubMed]
56 ။ Léveilléက F, Papadia S က, Fricker M က, ဘဲလ် KF, Soriano FX et al ။ Synaptic လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်အခ်ါ apoptosis လမ်းကြောင်း၏ (2010) နှိမ်နင်းရေး။ J ကို neuroscience 30: 2623-2635 ။10.1523 / JNEUROSCI.5115-09.2010 PubMed: 20164347။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ တစ်ဦး homeostatic circuit ကို: အကယ်လစီယမ် signal ကိုအားဖြင့် mitochondrial Motilal နှင့်ဖြန့်ဖြူး၏ရီ M က, Weaver: D, Hajnóczky, G (2004) ထိန်းချုပ်ရေး။ J ကိုဆဲလ် Biol 167: 661-672 ။10.1083 / jcb.200406038 PubMed: 15545319။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
58 ။ ဂွမ် JS, စု SC, Gao J ကိုယောသပ် N ကို, Xie Z ကို et al ။ (2011) Cdk5 တပ်ကိုအချက်ပြလမ်းကြောင်းမှတဆင့်မှတ်ဉာဏ် function ကိုနှင့် hippocampal plasticity ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ PLOS ONE 6: e25735 ။10.1371 / journal.pone.0025735 PubMed: 21984943။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ Chen က J ကို, Zhang က Y ကို, Kelz ကို MB, Steffen ကို C, အန်း ES et al ။ [မြစ်ဝကျွန်းပေါ်] FosB ၏အခန်းကဏ္ဍ: နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှုအားဖြင့် hippocampus အတွက် cyclin-မှီခို kinase 2000 ၏ (5) induction ။ J ကို neuroscience 20: 8965-8971 PubMed: 11124971။ [PubMed]
60 ။ ဘား DG, Bibb ဂျေအေ (2011) သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါနှင့်အာရုံကြောရောဂါဗေဒအတွက် Cdk5 ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက်။ res Bull 85: 9-13 ။10.1016 / j.brainresbull.2010.11.016။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
PLoS ONE မှဆောင်းပါးများကိုဤနေရာတွင်၏ယဉျကြေးထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ် သိပ္ပံပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်